Guddoomiye Jawaari oo kulan dhiiragelin la qaatay howl-wadeenna golaha shacabka | Somali National Television - sntv.so
Home GOLAHA SHACABKA Guddoomiye Jawaari oo kulan dhiiragelin la qaatay howl-wadeenna golaha shacabka
Guddoomiye Jawaari oo kulan dhiiragelin la qaatay howl-wadeenna golaha shacabka
Ujeedka Kullanka Maanta Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu la qaatay Howlwadeenada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Dalka ayaa waxaa uu ahaa dar dar gelinta howlaha shacabka iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa.
kulanka oo ka dhacay xarunta Golaha shacabka ayaa qaar ka mid ah howl wadeenada Golaha Shacabka oo kulanka ka hadlay waxa ay Gudoomiyaha Golaha Shacabka uga warbixiyeen howlaha shacabka uu ummadda u hayo, xaaladaha ay ku suganyihiin guud ahaan howl wadeenada Golaha Shacabka ,waxayna sidoo kale Guddoonka Golaha ay ku amaaneen hogaankiisa Wanaagsan.
Guddoomiyaha golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan ”Jawaari” ayaa aad u amaanay howsha adag ee ay dalka iyo dadka u hayaan howl wadeenada Golaha shacabka ,isagoo sidoo kale u mahad celiyay hay’adaha Amniga iyo Warbaahinta kaalintii ay ka qaateen baahinta howlaha Golaha shacabka.
kullanka maanta Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu la qaatay guud ahaan howl wadeenada Golaha shacabka ayaa waxa uu howlwadeenada ku dhiira gelinayaa in ay sii laba laabaan howsha adag ee ay Qaranka u hayaan.
Previous articleDowladda Kenya oo adkeyneysa ammaanka Gobolka Waqooyi bari.
Next articleTaariikhda Wasiirrada cusub ee la magcaabay